Hofisi yaComptroller Inoti kuGoverwa kweMari yeVechidiki Hakusi Pamutemo
Chikumi 14, 2012
Hofisi yebazi rinoongorora mashandisirwo emari nezvinhu muhurumende, yaComptroller and Auditor General, inoti nzira dzekupa mari kune vechidiki dziri kushandiswa nebazi rezve vechidiki nekuendeswa kwepfumi kuvatema, hadzisi pamutemo sezvo pasina umbowo hunoratidza kuti dzakabvumirwa nehurumende.
Gwaro rinonzi rakaburitswa naAuditor General, Amai Mildred Chiri, rinoti hapana humbowo hunoratidza kuti vezvemutemo muhurumende vakabvumidza bazi iri kushandisa bhanga reInfrastructure Development Bank of Zimbabwe kuti rishandiswe nebazi iri mukupa mari vechidiki vanoda kutanga zvirongwa zvebudiriro.
Bazi revechidiki, iro rinotungamirirwa naVaSaviour Kasukuwere veZanu PF, rakapiwa mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora nebazi rezvemari kuti ibatsire vechidiki mukutanga mabasa ebudiriro.
Bazi iri rakazonyorerana chibvumirano nebhanga reIDBZ, icho chakapa masimba kubhanga iri kuti rione nezvekufambiswa kwemari iyi.
Taedza kubata hofisi yaComptroller and Auditor General kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vati tiite zvekunyora mibvunzo yedu kwavari.
VaPsychology Maziwisa vanowe chipangamazano munyaya dzezvemitemo nematongerwo enyika mubazi rezvevechidiki vaudza Studio 7 kuti bazi ravo harina mutemo warakatyora, sezvo rakaita zvose zvinotarisirwa pakupa mutoro wekugoverwa kwemari kubhanga reIDBZ.